Nanao fianianana i Anthony Mahler ho minisitry ny fizahantany vaovao an'i Belize
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanao fianianana i Anthony Mahler ho minisitry ny fizahantany vaovao an'i Belize
Hon. Nanao fianianana tamin'ny fomba ofisialy i Anthony Mahler ho Minisitry ny fizahantany ary ny Fifandraisana Diaspora ny Alatsinainy 16 Novambra 2020. Notendren'ny praiminisitra vao voafidy izy taorian'ny fifidianana ankapobeny teto amin'ny firenena, izay natao ny Alarobia 11 Novambra 2020.
Ny Minisitra Mahler dia tsy vahiny amin'ny fizahan-tany, ary manolo-tena tanteraka amin'ny asa ho avy. Tamin'ny fihaonany voalohany tamin'ny mpiasan'ny minisiteran'ny fizahantany sy ny birao fizahan-tany Belize dia nanome teny fampaherezana izy ary nanamafy ny fahavononany hiara-hiasa amin'ireo mpiara-miasa rehetra hamerina amin'ny laoniny ny indostria. “Vonona izahay amin'ny famerenana ny indostrian'ny fizahantany aorian'ny kapoka mafy nataon'ny COVID-19 ho an'ny toekarena. Ny laharam-pahamehanay dia ny fanohanana ireo orinasa fizahan-tany sy asa, ary hamerina ny fahatokisan'ny mpizahatany. Tsy maintsy mandrisika ny fangatahana fitsangatsanganana any Belize isika na eo aza ny COVID-19, "hoy ny fanamarihana nataon'ny Minisitra Mahler," ary tokony hijanona ho be fanantenana foana isika. "
Ny sehatry ny fifantohana hafa eo ambany fitantanan'ny Minisitra Mahler dia ny fampivoarana ny vokatra fizahan-tany, ny fiofanana, ary ny fanavaozana mitohy sy ny fanovana mankany amin'ny maodely fampandrosoana maharitra ny fizahan-tany. Ny minisitra Mahler koa dia manolo-tena amin'ny famolavolana rafitra misy dikany hisarihana ny diaspora Belizeana. Ny maso fitantanana ny sisintany dia tafiditra ao anatin'ny portfolio-ny ihany koa.
Izy dia talen'ny fampandrosoana ny vokatra teo aloha tao amin'ny Birao fizahan-tany Belize, avy eo nifindra tany amin'ny Speednet Communication Limited ho talen'ny Marketing, talohan'ny nifidianana azy tao amin'ny House of Representatives. Ny Minisitra Mahler dia nitana ny mari-pahaizana Master momba ny fitantanan-draharaha avy amin'ny University of Phoenix, mari-pahaizana momba ny diplaoma momba ny diplaoman'ny Master momba ny fanadihadiana ara-bola, ny mari-pahaizana momba ny fitantanana stratejika avy amin'ny Tuck Institute any Dartmouth, ary nanompo tamin'ny sehatry ny fitantanana amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina.
Dominica dia mijery ny fanasokajiana loza mety hitranga amin'ny firenena COVID-19
Ny WTTC dia manandrana mampivondrona ny sasany amin'izao tontolo izao amin'ny fanarenana ny fizahan-tany